Mpikatroka Saodiana Notsaraina, Tsy Navela Nifandray Tamin’ireo Mpisolovavany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2013 6:21 GMT
Nanomboka androany vao maraimbe, 1 Septambra ny fotoam-pitsarana faha-efatra an'i Umar al-Saeed, ao an-tanàna Saodiana ao Buraydah. Mpikambana mpitantana ny fikambanana lehibe miaro ny zon'Olombelona ao amin'ny firenena, Fikambanana miaro ny zo sivily sy politika Saodiana (ACPRA) i al-Saeed. Mbola nosakanan'ny mpitsara tsy hifandray tamin'ny mpisolovavany indray ity mpikatroka nogadraina ity mba “hahalalany ny tena momba azy manokana, na koa mpanaraka fotsiny ihany izy.” Noterena hiteny mafy izy raha nikasa haka hevitra tamin'ireo mpisolovavany amin'ny zavatra rehetra.
Tao amin'ny Twitter, nifampizara izay zava-nitranga tao amin'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny teny ifankafantarana hoe #عمر_السعيد, anaran'i al-Saeed amin'ny teny Arabo ireo mpiserasera .